म्यारोडोनालाई पेलेकाे श्रदान्जली, 'एक दिन हामी आकाशमा बल खेल्नेछौँ' - DURBAR TIMES
HomeSportsम्यारोडोनालाई पेलेकाे श्रदान्जली, 'एक दिन हामी आकाशमा बल खेल्नेछौँ'
म्यारोडोनालाई पेलेकाे श्रदान्जली, ‘एक दिन हामी आकाशमा बल खेल्नेछौँ’
एजेन्सी । फुटबलका जीवित भगवान मानिने पेलेले अर्जेन्टिनाका महान खेलाडी डिएगो म्यारोडोनाको निधनप्रति दुख व्यक्त गरेका छन् ।
विश्वकप विजेता अर्जेन्टिनाका कप्तान म्यारोडोनाको बुधबार हृदयघातको कारण ६० वर्षको उमेरमा निधन भएको थियो । म्यारोडोनाको निधनपछि सामाजिक संजाल ट्वीटरबाट पेलेले श्रदान्जली व्यक्त गरेका छन् ।
यो पनि: ‘ह्याण्ड अफ गड’ फूटबल स्टार डिएगो म्यारडोना रहेनन्
८० वर्षीय पेलेले आफुले महान साथी गुमाएको समेत बताएका छन् । यस्तै उनले आफुहरुले एक दिन आकाशमा फुटबल खेल्ने समेत बताएका छन् ।
‘कस्तो दुखद समाचार । मैले एक महान साथी गुमाए । विश्वले लिजेण्ड गुमाएको छ । धेरै कुरा भन्न बाँकी छ तर भगवानले उनको परिवारलाई बल दिउन,’ पेलेले लेखेका छन्, ‘एक दिन, म आशा गर्दछु कि हामी आकाशमा बल खेल्ने छौँ ।’
त्यस समय म्यारोडोना टिमका कप्तान रहेका थिए । अर्जेन्टिनाका लागि म्यारोडोनाले १९७७ देखि १९९४ सम्म खेलेका थिए । उनले अर्जेन्टिनाका लागि ९१ खेलमा ३४ गोल गरेका थिए ।
सन् २००८ देखि २०१० को विश्वकपसम्म म्यारोडोना अर्जेन्टिनाको मुख्य प्रशिक्षक रहेका थिए ।म्यारोडोनाले बार्सिलोना, नापोली र सेभिया जस्ता युरोपका ठुला क्लबबाट खेलेका थिए ।
Previous articleके हो हरिबोधनी एकादशी? के छ यसको महत्व?
Next articleभारतीय विदेश सचिव श्रृंगला नेपाल आइपुगे